Semalt na-akọwa Ụdị Ịzụ Ọganihu Azụmahịa E-Ego
Ụwa nke e-azụmahịa na-enwe nnukwu mmụba, ya mere onye ọ bụla kwerena mkpochapụ nke brik na omenala na-echekwa, dị na Europe na United States, dị nnọọ nso. N'agbanyeghị na e-azụmahịaa na-atụ anya ka a na-atụ anya na ụwa dum, e-azụmahịa na Asia Pacific mpaghara ga-enwe ọganihu pụrụ iche.
E-azụmahịa na cross-border sphere ga-outdo arụmọrụ ụlọ naenwe pasent iri na asaa maka afọ ole na ole sochirinụ ka a na-atụ anya na ọnụego ahụ ga-aba pasent 12. Onye ọkachamara Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, Igor Gamanenko na-akọwa otú mpaghara e-azụmahịa na-eto eto na mpaghara dị iche iche.
Ihe Mere Ihe Ntuba Mgbasa Ozi Na - amụba
Ntọala akụrụngwa nke ụwa na-eme ka azụmahịa na-arụ ọrụ n'ịntanetị, na-eme ka ọ dịkwuo mfe - mobile web developer.E nwere ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ a pụrụ ịdabere na ya nke na-enye ohere ka nchekwa ngwaahịa dị mma. Ọzọkwa, ịbanye n'ime smartphones niileenwere ike ịnweta ọrụ ịntanetị na mba ndị mepere emepe na mba ndị na-emepe emepe, ebe SEO aghọwo ngwá ọrụ makantaneti nke azụmahịa.
Site n'inwe akụ na ụba na-etolite etiti n'etiti mba Asia, ebe ndị mmadụ nwereenweghị afọ ojuju na ngwaahịa ụlọ ha, e-azụmahịa ga-ere ahịa zuru ụwa ọnụ nke $ 627 site na 2022. Ihe ka ọtụtụ azụmahịa e-azụmahịa na-agbasona ngwaahịa ndị na-anaghị emepụta n'ógbè, ya mere, China na-ewere òkè ọdụm nke ahịa n'Ịntanet.
Ịzụ ahịa na Cross-Border na China
N'ihi SEO, ahịa ndị dị n'ịntanetị ga-eme nke ọma n'afọ a. China ga-ebute cross-borderazụmahịa online, na-eru narị nde mmadụ abụọ na-ere ahịa n'Ịntanet site na 2020 na ahịa ndị ahụ ruru $ 245 dị ka Accenture..Yananke a, asọmpi asọmpi n'etiti mba Chinaba Alibaba na US Amazon si n'ahịa Chinois na-eme ka ndi mmadu kwado ezi omume site n'oru ulo oru ntaneti.
Nchikota mmeri na-emepụta ihe ndị dị ka gụnyere ịkwụ ụgwọ nke nnyefeihe ngwaahịa ahụ, ụgwọ nchịkwa usoro, na omume SEO na-eche echiche. Banyere ịkwụ ụgwọ, ụlọ ahịa ndị dị na China na-enye ọtụtụ ugwoụzọ ndị dị nchebe ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ha. Ụdị dị ka Alipay (Alibaba) na Tencent (WeChat) emeela usoro dị ukwuu nke na-anabata ịkwụ ụgwọSitere mba ọ bụla.
Ịzụ ahịa Cross-Border na mpaghara ndị ọzọ
Dịka nyocha nke KPMG na-eme na Middle East na mpaghara Africa, ArabicAfrica nwere nnukwu ekele maka ahia online n'uwa. Dị ka ọmụmaatụ, usoro Middle Eastern version nke Amazon - Souq- Nnukwu ahia ntaneti n'uwa a kariri ihe di nde 8 n'ime mmalite 2017.
Ngwaahịa 'nlọghachi dị oke ọnụ dika American Express Express Kwa Afọakụkọ nke 2016. Taa, ndị ahịa nwere ike ịnweta nkwụghachi ụgwọ nke ego ha zụrụ ruo otu pasent site na PayPal ọrụ.
Azụmahịa Cross-Border na America
Ọmụmụ ihe, nke ndị ụlọ ọrụ nyocha dị iche iche na-eme, na-egosi na ahịa ala na United Statesego nke ihe di ka pasent 36 nke ahia ahia n'uwa. Ihe kariri ọkara nke ntanetị n'Ịntanet na-aga ebe ahịa dị ka eBay naAmazon, ebe ihe kariri ọkara nke ndị na-ere ahịa n'ókèala ha jiri USD dị ka ego a tụkwasịrị obi. Na usoro a, SEO na-arụ ọrụ dị ịrịba amaarụ ọrụ n'ime nkwalite ọnụnọ n'ịntanetị nke ndị na-ere ahịa.
Ọganihu nke ahịa n'ahịa n'Ịntanet bụ usoro nke gụnyere nchọpụta nammezu nke omume kachasị mma mgbe ị na-erube isi. Ọ bụghị ihe ijuanya na ọrụ nnyefe ịrụ ọrụ nke ọma aghọwoụzọ ọzọ na usoro omenala nke mbupu mgbe ị na-eji SEO eme ka ọnụnọ sie ike na ụwa dum. Ya mere, lee ma mpaghara maihe ndị na-eme ka ndị mmadụ na-achọ ọrụ na-enweghị atụ, ụkpụrụ omenala na-eme ka atụmatụ ahịa dị mma.